December 1, 2007, 5:04 pm Filed under: My Opinion အစဉ်အဆက်အမြဲတမ်း တည်ရှိနေခဲ့သော `ပြည်ထောင်စုကြီးခွဲထွက်ရေး´ကိစ္စအတွက် ကျွန်မ လက်လှမ်းမှီသလောက် ၊ စဉ်းစားလို့ရသလောက် တွေးနေမိသည် .. ။ ကျွန်မသည် မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာပြည်ရှိအခြားလူမျိုးများကို မြန်မာဟုပဲ ငယ်စဉ်ကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့ကာ ခင်မင်တွယ်တာစိတ်အပြည့်ရှိခဲ့သည် .. ။ ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ မွန် ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင် ၊ ရှမ်း အားလုံးက ကျွန်မတို့နဲ့ တမြေတည်းနေ ၊ တရေတည်းသောက် မောင်နှမများသာ ဖြစ်သည်ဟု ခံယူထားပါသည် .. ။ ပြည်နယ်ဒေသများက အမှန်တကယ်ပင် ခွဲထွက်ချင်သလော ၊ မခွဲထွက်ချင်သလော ကျွန်မ အသေးစိပ် သေသေချာချာတော့ အလုံးစုံမသိပါ .. ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ကူးထဲမှာတော့ ဘယ်ဒေသကိုမှ မခွဲထွက်စေချင်ပါ။ ကျွန်မက ပဲခူးသူစစ်စစ်ပါ .. ။ ပဲခူးက ခွဲထွက်မည်ဆိုလျှင်လည်း ကျွန်မ ကြိုက်မည်မဟုတ်ပါ .. ။ ခွဲထွက်ချင်ကြသည့် အခြေခံအကြောင်းရင်းကို ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်သည်။
December 1, 2007 @ 9:20 pm Reply	That is in my thoughts for long time, definitely true and valuable post. May Myanmar be United.🙂
Comment by paing ye
December 2, 2007 @ 3:21 am Reply	Let say…Myanmar is not as big as some of our neighbor countries. People were saying, they want democracy like, United state. Yes, some state in US is bigger than Myanmar. If all the states want become themselves, I am worry other country will attack later.
December 2, 2007 @ 4:15 am Reply	federal union is only the answer .. if we let them chose their state government by themselves .. if we let them have their own constitution and their own administration .. and their own law .. with the support of main union .. they happy .. we happy and nobody want to go out .. and if we doing well .. can even hope other country like thailand wanna join to our union .. who can say it cannot happen ? cos there isatalking of canada to join USA long time ago .. cheer!
December 2, 2007 @ 7:08 am Reply	(၁) တိုင်းရင်းသားများတွင် လုံးဝခွဲထွက်လိုသူနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးပြီးမှ မဲနှင့် ခွဲထွက်လိုသူဆိုပြီး ရှိပါသည်။(၂) `တိုင်းရင်းသားတွေက လူမျိုးစွဲ ပိုကြီးပါတယ် ´ဟု လင်းလက်က ပြောထားသည်။ သူတို့ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို နေရာမပေးဘဲ One Nation, One Language ဖြစ်အောင်လုပ်ထား၊ ဖိနှိပ်ထားချိန်တွင် Survival ဖြစ်အောင်လုပ်နေရ၍ ဟူသောအချက်ကို မြင်ရပါမည်။(၃) ခွဲထွက်ရေးဆိုတာ Ideology အရ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် Geography အရ ဖြစ်နိုင်ချင်မှဖြစ်နိုင်မည်။ သယံဇာတ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ မဟာဗျူဟာကျရဲ့လား ဆိုတာတွေရှိသည်။ မရှိရင် နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်၍ မရ။ (၄) ဘာသာရေး Factor ကလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ-ခရစ်ယာန်ကရင် လူမျိုးစုများလေ အဲဒီနိုင်ငံဟာ အားနည်းတဲ့နိုင်ငံ (weak state) ဖြစ်လေ ဆိုပြီးပြောရတာရှိပါတယ်။
December 2, 2007 @ 9:33 am Reply	ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်တင်ပြထားတဲ့ လက်တွေ့ကျကျအကြံပြုချက် ပထမဆုံးစာကို ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ http://lightofmyanmar.blogspot.com/
December 2, 2007 @ 8:13 pm Reply	Hi,
We want Federal Union.We don’t want “One Nation, One Language”We want to study Our languages, Our cultures in School. But …We don’t haveachance to learn at least asasecond language..
December 3, 2007 @ 11:31 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI